यूरोपियन युनियनको होस्ट देश भएकोले बेल्जियमले उदाहरणको साथ नेतृत्व गर्नुपर्‍यो जब अनलाईन क्यासिनो नियमहरूको कुरा आउँदछ। दुर्भाग्यवश, यसले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन क्यासिनोहरूलाई बेल्जियमबाट खेलाडीहरू स्वीकार गर्न असमर्थ तुल्यायो। यसैले हामी क्यासिनोहरूको सूची सँगै राख्यौं जसले बेल्जियमका खेलाडीहरू स्वीकार गर्दछन् (या त स्थानीय बिरोहीसहित वा बाहेक), त्यसो भए तपाईले खोजीमा समय बर्बाद गर्नुहुन्न। जब अनलाइन क्यासिनोको स्थानीयकरण सेवाहरूको बारेमा कुरा गर्दै, बेल्जियमले डच, फ्रान्सेली र जर्मनलाई आधिकारिक भाषाहरू भएको रूपमा माग गर्दछ। हाम्रो क्यासिनो सूचीमा, तपाईले ती तीनवटा भाषाहरूमा पूर्ण अनुवादित वेबसाइट र ग्राहक समर्थन प्रदान गर्ने फेला पार्नुहुनेछ। पछिल्लो तर कम्तिमा होइन, तपाईं उत्कृष्ट र अनन्य बेल्जिस अनलाइन क्यासिनो बोनस कोडहरूको पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन यस क्षेत्रका शीर्ष प्रस्तावहरूसँग जडित छन्।
शीर्ष १० बेल्जियम अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
🥉 पार्टी क्यासिनो
€ 500 प्लस २० नि: शुल्क स्पिनहरू सम्म!
बोनस customers 300 नयाँ ग्राहकहरु को लागी
€ १००० बोनस + F० निःशुल्क स्पिनहरू
शीर्ष १० बेल्जियम अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
यदि त्यहाँ कुनै एक देश छ जसलाई क्यासिनोसको जन्मस्थान मान्न सकिन्छ, यो बेल्जियम हो। क्यासिनोको आधुनिक अवधारणा सयौं वर्ष अघि युरोपमा शुरू भयो, जब मनोरन्जनको अभाव थियो। कार्ड वा लोटरीको साथ मौकाको खेल खेल्नु सामान्य जनसंख्या बीच समय बित्ताको एक धेरै लोकप्रिय तरिका भयो।
त्यसबेलादेखि क्यासिनो गेमिले युरोप र विशेष गरी बेल्जियममा व्यापक लोकप्रियता पाएको छ। बेल्जियममा प्राय: अनलाइन क्यासिनोहरूले केवल बेल्जियमका खेलाडीहरू मात्र सबै युरोपियनहरू सम्मिलित छन्, फ्रान्सेली, डच, जर्मन र अन्य भाषाहरूमा उनीहरूको साइटहरू प्रस्ताव गर्छन्।
बेल्जियम केहि चीजहरूको लागि परिचित छ - हरियो पहाड र मैदानका रोलि rol्ग, विश्वका केही उत्कृष्ट चकलेटहरू र वाइनहरू, र पक्कै पनि संसारको शीर्ष क्यासिनो। एक्काईसौं शताब्दीमा, बेल्जियम छैन हराएको त्यो प्रतिष्ठा। बेल्जियमका ठूला क्यासिनोहरूको ठूलो अनलाइन उपस्थिति छ, अन्य देशहरूमा अक्सर अनलाइन जुवा प्रतिबन्ध लगाउने विवेकी कानूनको अभावको फाइदा उठाउँदै।
धेरै जग्गामा आधारित क्यासिनो बेल्जियममा पहिले नै राम्रो स्थापना भएको थियो, त्यसैले तिनीहरूको सेवाहरू अनलाइन प्रदान गर्न वेबसाइट स्थापना गर्ने यो साधारण कुरा थियो। यस तरिकाले उनीहरूले खेलाडीहरूको अझ ठूलो दायरा पनि आकर्षित गरे। जो पहिले क्यासिनो भ्रमण गर्न सक्दैनन् अचानक उनीहरूको आफ्नै घरको आरामबाट क्यासिनो गेमि experienceको अनुभव गर्न सक्दछन्।
बेल्जियममा क्यासिनो कानून
बेल्जियम खुलापन र पारदर्शिता मा विश्वास गर्दछ जब यो अनलाइन क्यासिनो उद्योगको कुरा आउँदछ। त्यसो भए, बेल्जियममा सबै अनलाइन क्यासिनो पूर्ण रूपमा माथि बोर्ड र कानूनी छन्। तिनीहरूले सरकार द्वारा निर्धारित केहि नियम र नियमहरू पालना गर्नुपर्दछ, तर अन्यथा, अपरेट गर्न स्वतन्त्र छन्। यसले खेलाडीहरूका लागि पनि समस्या कम गर्दछ, किनकि उनीहरूले कुनै पनि प्रतिबन्धको वरिपरि काम गर्नुपर्दैन। १ 1999 2010। र २०१० बीच, बेल्जियमले कानूनहरू पारित गर्‍यो जुन लटरी वा स्लट खेल प्रदायकहरूबाट पूर्ण रूपमा अनलाइन क्यासिनोमा शुरू हुने विभिन्न प्रकारका अनलाइन जुवालाई नियमन र इजाजतपत्र प्रदान गर्‍यो।
बेल्जियममा सबै अनलाइन क्यासिनोहरू एक केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा दर्ता र इजाजतपत्र भएको कारण, खेलाडीहरूले घोटाला वा जालसाजी साइटहरूको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन। प्रत्येक र हरेक क्यासिनोले विश्वासयोग्यता जाँच गर्न आवश्यक छ उनीहरूले आफ्नो देश भित्र व्यापार गर्न सक्नु अघि।
बेल्जियममा अनलाइन क्यासिनोहरू
त्यहाँ मुलुकका क्षेत्रहरूमा distributed वटा भूमिमा आधारित क्यासिनो वितरित गरिएको छ। त्यहाँ फ्लान्ड्रेसमा cas क्यासिनोहरू छन्, अन्य Wall वोलोनियामा र १ ब्रुसेल्समा। यसको लागि इजाजत पत्र प्रकार 'A' चाहिन्छ। त्यहाँ स्थानहरू पनि छन् जुन स्लट मेसिन खेलहरू प्रस्ताव गर्न अनुमति दिइन्छ, यद्यपि यस प्रकारको 'बी' को लागी आवेदन आवश्यक छ। कुनै पनि जुवा स्थापना गर्न न्यूनतम उमेर २१ बर्ष उमेर हो, जुन अनलाइन क्यासिनो साइटहरूमा रेजिष्ट्रेसनमा पनि लागू हुन्छ।
बेल्जियममा अनलाइन क्यासिनो कानूनी छन्? हो।
के बेल्जियममा क्यासिनो साइटहरू विश्वसनीय छन्? हो।
के म PaySafeCard / Neteller / Bancontact मार्फत जम्मा गर्न सक्छु? हो।
के अनलाइन क्यासिनो साइटहरूले EUR स्वीकार गर्छन्? हो।
बेल्जियममा अनलाइन क्यासिनो कानून
२०१० मा, गेमि Act कानून लाई अनलाइन जुवा पनि नियमित गर्न संशोधन गरिएको थियो। यस तरिकाले, बेल्जियममा अनलाइन क्यासिनो साइटहरू कानूनी भयो, धेरै कडा आवश्यकताहरूको अन्तर्गत। क्यासिनोहरूले 'A +' इजाजतपत्र प्राप्त गर्नै पर्छ, जुन १ years बर्षको लागि मान्य पनि छ। यसबाहेक, कानून बमोजिम, केवल भूमिमा आधारित क्यासिनोहरूले वेबसाइटहरू संचालन गर्न सक्दछन्।
अनलाइन क्यासिनो समाचार साइटहरू द्वारा रिपोर्ट गरिएको अनुसार, गेमि Commission आयोगले अनुमतिविहीन अनुमति नभएको क्यासिनो साइटहरूलाई सक्रिय रूपमा रोक्छ, र अपरेटरहरूले आपराधिक शुल्क र १००,००० सम्म जरिवाना लिन सक्दछ। वास्तवमा, धेरै वेबसाइटहरू पहिले नै प्रतिबन्धित गरिएको छ। तर खेलाडीहरूले भारी दण्डको सामना पनि गर्न सक्दछन्। जो यी वेबसाईटहरूमा खेलिरहेका छन् तिनीहरूलाई। २€,००० जरिवाना तिर्न अनुरोध गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, सरकारका लागि काम गरिरहेका बेल्जियमका नागरिकहरूलाई अनलाइन खेल्न निषेध गरिएको छ।
बेल्जियम इजाजतपत्रको उच्च-स्तरको कारण, स्थानीयहरूले क्वालिटी प्लेटफर्महरू, जस्तै ओविन्टेको क्यासिनोमा जडित ब्रविन क्यासिनोमा पहुँच गरेका छन् र केहि उत्तम अनलाइन क्यासिनो बोनसको साथ धेरै किसिमका खेलहरू प्रदान गर्दछ।
शीर्ष १० बेल्जियम अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 8, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० बेल्जियम अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० बेल्जियम अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 बेल्जियममा गेमि।
3 बेल्जियममा क्यासिनो कानून
4 बेल्जियममा अनलाइन क्यासिनोहरू
5 बेल्जियममा अनलाइन क्यासिनो कानून
शीर्ष १० बेल्जियम अनलाइन ...